ယိုစိမ့်နေသော ရေချိုးခေါင်းကို ပြုပြင်နည်း - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
ပေါက်နေတဲ့ ရေချိုးခေါင်းကို ဘယ်လိုပြင်မလဲ။
အိမ်မှာရေချိုးဆေးဖြန်းဆေးကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုပြီးရင် ပိတ်ဆို့တာ၊ ရေယိုစိမ့်တာ စတာတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့် ယိုစိမ့်နေတဲ့ ရေချိုးခေါင်းကို ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ အောက်မှာ အယ်ဒီတာနဲ့ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ရေချိုးခေါင်းပေါက် ယိုစိမ့်နေသည်ကို တွေ့ရှိပါက၊ ရေယိုစိမ့်ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် တည်နေရာကို ဦးစွာ ရှာဖွေပြီးမှ ပကတိအခြေအနေအရ သင့်လျော်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ရေယိုစိမ့်ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် ရေယိုစိမ့်သည့်နေရာ ကွဲပြားပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအမံများ ကွဲပြားပါမည်။
1. ရေပန်းခေါင်းသည် စတီယာရင်ဘောလုံး အနေအထားတွင် ယိုစိမ့်နေပါက၊ ရေချိုးခေါင်းကို စတီယာရင်ဘောလုံးကွင်းမှ ဦးစွာဖယ်ရှားသင့်ပြီး အတွင်းရှိ O-ring နှင့် ဆင်တူသော အလုံပိတ်ထုတ်ကုန်ကို တွေ့ရှိရမည်၊ ထို့နောက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ထုတ်ကုန်ဖြစ်သင့်သည်။ အသစ်တစ်ခုနှင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ရေချိုးခေါင်းကို ပြန်တပ်ဆင်ပါ။
2. အကယ်၍ရေချိုးခေါင်းလက်ကိုင်၏ ချိတ်ဆက်မှု အနေအထားတွင် ယိုစိမ့်နေသည်၊ ဦးစွာ ရေပန်းပိုက်မှ ရေပန်းပိုက်မှ ရေချိုးခေါင်းဇယ်၏ လက်ကိုင်ကို ဖယ်ရှားရန် ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ ဒုတိယအနေနဲ့၊ လက်ကိုင်အနေအထားမှာ အပ်ချည်ကို သန့်စင်ပြီး ချည်ပတ်ပတ်လည်မှာ သင့်လျော်တဲ့ အပေါ်ယံအလွှာကို လိမ်းပေးပါ။ ရေပိုက်များကို ကပ်ရန် ကော်၊ သို့မဟုတ် ရေပိုက်များအတွက် အထူးတိပ်ကို အကြိမ်များစွာ ပတ်ထားသည်။ ထို့နောက် ရေချိုးခေါင်း၏ လက်ကိုင်ကို နောက်သို့ တပ်ဆင်ပြီး တင်းကျပ်စွာ တင်းကျပ်ပါ။